Bitumen tank, Bitumen Emulsion Plant, mmanụ ụgbọ mmiri Diathermic - Jianeng
Nchekwa nchekwa silo
Osisi Bitumen emulsion
Mmiri Diathermic Boiler
Carafe à bitume
SBS Polymer gbanwetụrụ Bitumen pant
Tankị kwụ ọtọ
Ọnọdụ kpo oku nke ikuku asphalt nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nwere ike ikewa n'ime: ikuku mmanụ ọkụ, kpo oku eletrik na kpo oku ozugbo site na onye na-ere oku. Enwere ike idozi olu ya dika ihe ndi ahia ya choro, o nwekwara ike banye n’ime njem nke ebu. E nwere ike imepụta iche iche maka ikpo ọkụ na ngwaọrụ agwakọta maka tankị bitumen nwere ebumnuche dị iche iche, ka o wee gboo mkpa ọnọdụ ọnọdụ ọrụ. Mgbe a na-eji ọtụtụ tankị bitumen n'otu oge, enwere ike itinye ọkpọkọ dị n'ihu tank iji mee ka nrụnye saịtị ọrụ rụọ ọrụ. A na-etinye pipeline niile na ụlọ ọrụ ahụ. N'ọnọdụ nkịtị, ọ dịghị mgbanwe achọrọ na ọrụ, nke mere na anyị nwere ike wezuga iji kpuchido iguzosi ike n'ezi nke pipeline. Ọ bụrụ na tankị bitumen chọrọ flue gas raara ya nye, enwere ike ịhazi ya dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
Mụtakwuo Kpọtụrụ anyị
Vetikal bitumen tank
Ọnọdụ kpo oku nke vetikal asphalt nke ụlọ ọrụ anyị na-emepụta nwere ike ekewa n'ime: ikpo ọkụ mmanụ na-ekpo ọkụ na kpo oku eletrik. Enwere ike ịhazi olu ahụ site na 20 m³ ruo 2000 m3 dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Candị dị iche iche nke ikpo oku na ngwaọrụ agwakọta nwere ike imepụta maka tankị bitumen nwere ebumnuche dị iche iche iji mezuo ihe achọrọ maka ọnọdụ ọrụ ọrụ. Enwere ike itinye ihe ngosipụta onodu a ọtọsara na ngosipụta mmiri mmiri elektrọnik dịka ihe ndị ahịa chọrọ chọrọ iji mezuo njikwa akpaka dị elu na nke mmiri dị ala. Ọ bụrụ na tankị bitumen chọrọ flue gas raara ya nye, enwere ike ịhazi ya dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
Tankị bitumen akpa
Bitdị akpa bitumen nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara kwesịrị ekwesị maka nchekwa bitumen na njem. Enwere ike ibugharị ya n'oké osimiri dị ka ọnọdụ nke njem ụgbọ mmiri si dị, yana oke kachasị nke 55 cubic mita, enwere ike ịhazi ya ma tinye ya na ndị agitators. Bitdị akpa bitumen dị mma maka ịkwaga na mbufe asphalt. Enwere ike idozi ụdị akpa bitumen n'ime ọkụ na-eduzi kpo oku, ọkụ ọkụ ma ọ bụ kpo oku ozugbo site na ndị na-ebunye ya. Mgbe ejiri ọtụtụ tankị eme ihe n'otu oge, enwere ike ịhazi ma dobe ọkpọkọ dị n'okpuru ebe a iji mee ka tank ahụ dum dị mma mgbe ị na-agbakọ na saịtị.
Igwe osisi bitumen nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dị mfe iji rụọ ọrụ ma wụnye. E kewara tank ahụ n'ime ụlọ abụọ, akụkụ ahụ dị elu nwere eriri igwe na-ekpo ọkụ, sistemụ hydraulic na-akpali bọmbụ bitumen otu otu, bitumen na-agbaze site na kpo oku. A na-ete mmanụ ọkụ dị ala ka ọ nọgide na-agbaze bitumen ahụ, emesịa ya na-agbapụta maka iji ya. Enwere ike itinye decanter bitumen n'ime akpa maka njem. Companylọ ọrụ anyị na-arụpụtakwa ngwaọrụ ịgbaze (akpa) ịgbaze, ihe eji egbu ube ala, ọrụ dị mfe, arụmọrụ dị elu.
A na-ekewa salo na-ekpo ọkụ silo nke ụlọ ọrụ anyị kere na ụdị nchebe gburugburu na ụdị nkịtị. Enwere ike ịhazi ya na 80t / h-480t / h asphalt agwakọta osisi, a nwekwara ike ịhazi ụda ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Olu nke 160 tọn na nke dị n'okpuru nwere ike ịbanye na njem akpa. Companylọ ọrụ anyị emeela ka usoro mmepụta nke nchekwa nchekwa silo dịgide ruo ọtụtụ afọ, na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Nchekwa gburugburu ebe obibi nchekwa enyi na gburugburu silo mezuru oke achọrọ maka nchekwa gburugburu.
Osisi bitumen emulsion mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị nwere otu isi mmanụ, otu mmiri ọkụ, mmiri mmiri mmiri emulsified mmiri abụọ, otu akpa bitumen, otu akpa bitumen (maka iji ya mee ihe), otu mgbapụta bitumen na-agbazi agba, otu mgba ọkụ emulsion na-agbazi agbapụta. , otu igwe ihe, otu ebe bọmbụ butere bitumen na otu ebe njikwa eletrik. Ihe ndị metụtara mmanụ ọkpọkọ na-ekpo ọkụ, ọkpọkọ mbupụ bitumen, ọkpọkọ nnyefe emulsion. E kewara osisi Bitumen emulsion ụzọ abụọ: akpaaka na ọkara. Ndị na-akpaghị aka zuru oke wụsara ihe emulsifier ahụ, site na usoro ngbanye ụzọ ahụ, na-agbakọ emulsion na bitumen na igwe ihe. Usoro dị mfe, dị mfe iji rụọ ọrụ, dịkwa mfe ịmụta na ịghọta.
Sms Polymer gbanwetụrụ bitumen pant nke ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ skid agbakwunyere igwe eji ekwu okwu, nke kachasị adaba maka nrụnye na mgbasa. A na-ejikọ tank ahụ na-agwakọta ọnụ na-agba ọsọ ọsọ iji zere ezughị ezu nke sbs na bitumen. Na-enweghị mbuze, enwere ike imepụta ya site na ịka ya mgbe ị na-eri nri. Ejiri obere bitumen SBS polymer gbanwere ụdị abụọ: akpaaka na ọkara na-akpaka. A na-atụkwa osisi PMB na-akpaghị aka site na ịtụle modul ma jikọta ya na sbs na bitumen n'ụzọ ziri ezi. Sistemụ nchịkwa kọmputa nwere ike nyochaa ọnọdụ mmepụta n'oge ozugbo.
A na - ekewa mmanụ ikuku na - ebubata mmanụ na - ere ọkụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara n'ụdị nkịtị na ụdị ikuku ọkụ. Onye na-ere oku nwere ike ịbụ mmanụ dị mfe, mmanụ gas ma ọ bụ mmanụ mmanụ. Thedị nke ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na-eji nsị okpomọkụ nke flue gas na-ekpo ikuku maka ikpo ọkụ, nke nwere ike belata okpomọkụ nke ike ọgwụgwụ, n'ihi ya enwere ike iji ọkụ ọkụ nke ike iyuzucha ihe dị ka 7%, yabụ arụmọrụ ọkụ ahụ dị ihe dị ka 90 %.
Wuxi Jianeng ka atọrọ na 1999. O nwere akuku ahihia di 24,000, osisi nde 38.28 nke isi obodo, ihe kariri ndi oru 20 na ndi oru 100.
Wuxi Jianeng bụ ọkachamara na mmepụta ngwa ọrụ na-agakọ maka ụdị agwakọta agakọ. Ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ ogologo oge gụnyere LINTEC, AMMANN, NFLG, XCMG, MARINI, D&G, NIKKO na Tanaka.
Wuxi Jianeng etinyewo aka na nrụpụta ọrụ na imepụta ihe eji arụ ọrụ nke igwe ihe karịrị afọ iri abụọ. Site na ịchụso arụmọrụ ngwaahịa, ọ nwetala ọtụtụ ihe omumu ihe omimi na ihe n ’ụlọ ịba uru Utility, nke enwetara otuto niile na ụlọ ọrụ.
Vetikal bitumen tank maka XCMG
Horizontal bitumen tank maka NFLG
Ihe nchekwa nchekwa silo maka AMMANN
Vetikal bitumen tank maka AMMANN
Ihe nchekwa nchekwa silo maka Lintec
Horizontal bitumen tank maka AMMANN
Vetikal Bitumen tank maka D&G
Vetikal bitumen tank maka D&G 2
Onye Mmekorita anyi
N ’ụlọ ọrụ
Ngwaahịa Na-ekpo ọkụ , Ebe Ntinye Sitemap , Ebe AMP Mobile
bitumen agbaze Equipment , Small Gold agbaze Ọkụ , Asphalt agbaze Equipment , Drumn Melting , Mobile Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H) , Mkpuchi Nchekwa Bolt, Ebe Ngwaahịa niile.